UZONDO UTSHELA UZUMA UKUTHI AVELE ENKANTOLO OKANYE ABHEKANE NOKUSHUSHISWA | Scrolla Izindaba
UZONDO UTSHELA UZUMA UKUTHI AVELE ENKANTOLO OKANYE ABHEKANE NOKUSHUSHISWA
UJacob Zuma uthole incwadi evela kwiPhini leNhloko yamaJaji uRaymond Zondo neKhomishini yokulawulwa koMbuso yidlanzana ngoLwesibili, exwayisa lowo owayengumengameli ukuba avele enkantolo noma abhekane nokushushiswa ngamacala obugebengu.
Incwadi ichaza ukuthi uZuma, okwamanje olinde isinqumo seNkantolo yoMthethosisekelo mayelana nelungelo lakhe lokuthula, kumele aphendule imibuzo mayelana neminyaka eyisishiyagalolunye ayisebenzile.
Ummeli kaZuma uEric Mabuza ukuqinisekisile ukuthi, uyitholile incwadi ebhalwe ngunobhala wekhomishini uItumeleng Mosala.
“Ikhomishini ifisa ukukucacisela ukuthi, noma ngabe inkantolo ingakipha siphi isinqumo sayo mhla zi-18 kuMasingana, ubophezelekile ukuthobela amasamanisi futhi uvele phambi kwawo, ngoba amasamanisi ahlala esemthethweni futhi ayakubopha njengoba engahoxiswanga, futhi angabekwa eceleni noma amiswa,” kusho incwadi.
“Ngakho-ke, ikhomishini ifisa ukukucacisela ukuthi noma yikuphi ukwehluleka kwakho ngaphandle kwesizathu esizwakalayo, ukuvela phambi kwayo kusukela mhla zi-18 kuya kumhla zingama-22 kuMasingana wezi-2021 kuzoba yicala.”
Ngonyaka odlule, uZondo wakhipha amasamanisi ayeyalela uZuma ukuba avele phambi kwekhomishini kusukela mhla zi-18 kuMasingana kuya kumhla zingama-22 kuMasingana wezi-2021 nokusukela mhla ziyi-15 kuNhlolanja kuya kumhla ziyi-19 kuNhlolanja wezi-2021.
UMabuza uthe, ngeke akwazi ukuphawula kabanzi ngencwadi ayithole ngoLwesibili.
Akukacaci ukuthi uZuma uzosilinda yini isinqumo seNkantolo yoMthethosisekelo ngaphambi kokuthi anqume ukuthi azofakaza phambi kwekhomishini kaZondo.